igwe anaghị agba nchara submersible mgbapụta
Mgbapu mmiri mmiri WQP igwe anaghị agba nchara
Pump Froth kwụ ọtọ
Usoro TZX High Head Slurry Pump
Ụdị UHB-ZK Corrosion Resistant Mortar Mud Pump
VS Vetikal Sump Slurry Pump
Akụkụ polyurethane PU Slurry Pump Parts
TZG(H) Usoro ájá gravel mgbapụta
Usoro TZSA Compact Slurry Pump
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) nkọwa ngwaahịa
QJ-ụdị submersible mgbapụta bụ moto na mmiri mgbapụta ozugbo n'ime mmiri n'ime ọrụ nke mmiri na-ebuli ngwá ọrụ, ọ bụ adabara mmịpụta si miri olulu mmiri nke ala mmiri nwekwara ike-eji maka osimiri, reservoirs, drains na ndị ọzọ na-ebuli mmiri oru ngo: tumadi maka ogbugba mmiri n'ubi na ugwu Plateau nke mmiri mmadụ na anụmanụ, kamakwa maka obodo, ụlọ ọrụ, ụzọ ụgbọ oloko, ogbunigwe, ebe a na-eji mmiri eme ihe.
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) atụmatụ
1. moto, mmiri mgbapụta otu, sinak n'ime mmiri na-agba ọsọ, nchekwa na ntụkwasị obi.
2. Enweghị ihe pụrụ iche achọrọ maka ọkpọkọ olulu mmiri na ọkpọkọ mmiri (ya bụ, ọkpọkọ ígwè, ọkpọkọ ash, ala ọma na ihe ndị ọzọ nwere ike iji ya mee ihe; n'okpuru ikike nrụgide, ígwè ígwè, eriri, ọkpọkọ plastik na ihe ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ọkpọkọ mmiri).
3. Ntinye, ojiji, mmezi dị mfe dị mfe, obere akara ụkwụ, ọ dịghị mkpa iwu ụlọ mgbapụta.
4. Ọdịdị dị mfe, na-echekwa akụrụngwa.
Iji mgbapụta mmiri okpuru mmiri nke ọnọdụ ndị kwesịrị ekwesị, njikwa kwesịrị ekwesị na ndụ nke mmekọrịta kpọmkwem.
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) cUsoro ojiji
Ụdị QJ Enwere ike iji nfuli submersible mee ihe mgbe niile n'okpuru ọnọdụ ndị a:
1. Atọ ike ọkụ AC nke atọ na-egosi ugboro ole 50HZ na voltaji nke 380 ± 5% V.
2. Ọnụ ụzọ mgbapụta ahụ ga-adị n'okpuru mita 1 n'okpuru ọkwa mmiri na-akpụ akpụ, mana omimi nke mmiri ekwesịghị gafere 70 mita n'okpuru ọkwa hydrostatic. Ngwunye ala nke moto ahụ dịkarịa ala 1 mita n'elu omimi mmiri nke ala.
3. Mmiri okpomọkụ adịghị elu karịa 20 ℃.
4. Mmiri dị mma chọrọ: (1) ọdịnaya mmiri nke mmiri adịghị elu karịa 0.01% (oke nha);
(2) PH uru na nso nke 6.5 ~ 8.5;
(3) chloride ọdịnaya nke na-erughị 400 mg / l.
5. Na-achọ uru dị mma, mgbidi ahụ dị mma, ọ dịghị nke ọma na-atụgharị.
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) nkọwa nhazi
1.QJ-ụdị submersible mgbapụta unit mejupụtara: mmiri mgbapụta, submersible moto (gụnyere eriri), mmiri ọkpọkọ na akara mgba ọkụ mejupụtara anọ akụkụ.
Submersible mgbapụta maka otu-amịpụta multi-ogbo vetikal centrifugal mgbapụta: submersible moto maka mechiri emechi mmiri jupụtara mmiri, vetikal atọ-phase onu asynchronous moto, moto na mgbapụta site claw ma ọ bụ otu drum njikọ ozugbo; kwadoro nkọwa dị iche iche nke eriri Core atọ; akụrụngwa mmalite maka ọkwa ikike dị iche iche nke ngbanwe ikuku na nbido onwe onye na-amalite, ọkpọkọ mmiri maka dayameta dị iche iche nke ọkpọkọ ígwè nke ejiri flange njikọ, mgbapụta elu na-ebuli elu na njikwa ọnụ ụzọ.
2. Mgbapụta nke na-eme ka ọ bụrụ nke ọ bụla nke baffle na-ejikọta ya na eriri roba; a na-edozi impeller na ogwe mgbapụta na-eji aka ya eme ihe; a na-adụnye eriri ma ọ bụ gbachie ya.
3. Igwe mmiri na-ebuli elu na-ebuli elu na valvụ nlele na akụkụ elu, iji zere oge nkwụsịtụ kpatara mmebi nke unit ahụ.
4. Ọkpụkpụ ụgbọ mmiri okpuru mmiri nke nwere akwa labyrinth sandstand na mgbakọ abụọ na-agbanwe agbanwe nke akara mmanụ skeleton, iji gbochie nsị nke ájá n'ime moto.
5. Submersible moto na mmiri lubricated bearings, akụkụ ala nke roba na-achịkwa ihe nkiri, nrụgide na-achịkwa mmiri, nke mejupụtara ụlọ ịwa ahụ, gbanwee nrụgide nke mgbanwe okpomọkụ kpatara; moto winding na polyethylene mkpuchi, naịlọn jaket inogide n'ji ngwongwo mmiri , USB njikọ site QJ-ụdị cable njikọ technology, na njikọ mkpuchi anya scraping agba oyi akwa, e jikọtara, ịgbado ọkụ ike, na raw roba gburugburu a oyi akwa. Na mgbe ahụ, ọbọp na mmiri na-eguzogide teepu teepu 2 ruo 3 n'ígwé, n'èzí ngwugwu na 2 ka 3 n'ígwé nke waterproof teepu ma ọ bụ gluu na oyi akwa nke roba teepu (bike belt) iji gbochie mmiri seepage.
6. A na-emechi moto ahụ, mechie ya na nkwụsị nkwụsị nkenke na eriri USB.
7. Ngwunye elu nke moto nwere oghere ịgba mmiri, enwere oghere ikuku, akụkụ ala nke oghere mmiri.
8. Akụkụ dị ala nke moto ahụ na-ebuli elu na nke dị elu, na-agbanye na oghere maka ịdị jụụ, ọ na-egweri igwe anaghị agba nchara, na-eji mgbapụta elu na ala axial ike.
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) ụkpụrụ ọrụ
Tupu imeghe mgbapụta ahụ, ọkpọkọ na-amịpụta na mgbapụta ga-ejupụta na mmiri mmiri. Mgbe agbachara mgbapụta ahụ, impeller na-atụgharị na oke ọsọ, na mmiri mmiri na-agbagharị na agụba. N'okpuru omume nke centrifugal ike, ọ na-ahapụ impeller n'èzí na mmiri mmiri na-eji nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ na nrụgide na-abawanye site na mgbapụta Mbupụ, na-ewepụ ọkpọkọ na-apụ apụ. N'ebe a, na etiti nke agụba na etiti nke mmiri mmiri na-atụba na gburugburu na e guzobere ma ọ dịghị ikuku na ọ dịghị mmiri mmiri agụụ ala mgbali ebe, mmiri mmiri ọdọ mmiri na ọdọ mmiri nke ikuku mgbali n'okpuru edinam nke suction. ọkpọkọ n'ime mgbapụta ahụ, mmiri mmiri na-aga n'ihu na-anọgide na-esi na ọdọ mmiri mmiri na-asọpụta mgbe niile ma na-aga n'ihu na-asọpụ na ọkpọkọ mgbapụta ahụ.
QJ igwe anaghị agba nchara nke ọma submersible mgbapụta (miri miri emi mgbapụta) use na njirimara
QJ-ụdị submersible mgbapụta dabeere na mba ụkpụrụ e mere na-azọpụta ike ngwaahịa, ọtụtụ ebe a na-eji na ugbo ala ubi, ulo oru na Ngwuputa ulo oru maka mmiri ọkọnọ na drainage, Plateau, ugwu ndị mmadụ, anụ ụlọ mmiri.
Mgbapụta ahụ nwere mgbapụta QJ submersible na ụgbọ ala YQS n'ime otu mmiri dị n'okpuru mmiri iji rụọ ọrụ n'okpuru mmiri. Na usoro dị mfe, obere nha, ịdị arọ dị arọ, ntinye, nhazi dị mfe, ọrụ nchekwa, ntụkwasị obi, ike ike na ihe ndị ọzọ.
QJR usoro olulu mmiri na okpomọkụ na-eguzogide submersible mgbapụta bụ nke ọma na okpomọkụ na-eguzogide mmiri mmiri atọ na-adọ asynchronous moto ozugbo n'ime otu, kpọkọtara n'ime a okpomọkụ na-eguzogide submersible mgbapụta, mmiri ọkụ okpomọkụ ruo 100 Celsius C, na-mikpu n'ime olulu mmiri. , Mmiri bụ ngwá ọrụ dị irè; geothermal bụ otu n'ime ike kachasị dị ọnụ ala, dị ọcha, na-adịghị agwụ agwụ, nke a na-ejikarị eme ihe na kpo oku, ahụike, ịsa ahụ, ozuzu, ihe ọkụkụ, ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ na ogbunigwe, ọrụ ntụrụndụ, ụlọ ọrụ ahụike, akụkụ. Ọ nwere uru nke ọrụ dị mfe, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, enweghị mkpọtụ, arụmọrụ dị mma, arụmọrụ dị elu nke unit, nrụnye na nhazi dị mfe. Ọ nwere ọtụtụ uru dị ka okpomọkụ na-eguzogide, mgbochi corrosion na mgbochi ịka nká. Ọ bụ ngwaahịa kacha ọhụrụ nke mmiri ọkụ embankment.
1. Ojiji kwụ ọtọ, dịka na olulu mmiri nkịtị;
2. Oblique eji, dị ka n'ime ogbunigwe nke nwere okporo ụzọ mkpọda;
3. Ojiji nke kwụ ọtọ, dịka na ọdọ mmiri
QJ Igwe ọkụ eletrik nke nwere ike ime maka olulu mmiri (mgbapụta mmiri miri emi) Akpachara anya
1. A ga-eji nfuli nke ọma mee ihe n'ime ájá nke ihe na-erughị 0.01% nke isi iyi mmiri, ụlọ mgbapụta nke a na-eji mmiri na-ebu ụzọ mee ihe, ikike kwesịrị izute mmalite nke mmiri na-agba ọsọ.
2. Ọhụrụ ma ọ bụ megharịa olulu mmiri miri emi, kwesịrị ịhazigharị shea mgbapụta na nkwụsị nke impeller, onye na-eme ihe na-arụ ọrụ agaghị enwe esemokwu na shea.
3. Omimi nke ọma mgbapụta kwesịrị ịdị na-agba ọsọ tupu mmiri n'ime aro ma na-ebu shei maka tupu-agba ọsọ.
4. Tupu mmalite nke mgbapụta mmiri miri emi, ihe nyocha kwesịrị izute ihe ndị a:
1) isi bolts na-ike;
2) mkpochapụ axial iji mezuo ihe ndị a chọrọ, gbanwee mkpụrụ osisi bolt etinyewo;
3) a na-eme ka gland a na-akwakọba sie ike na mmanụ;
4) moto bearings e mmanu mmanu;
5) Bugharia rotor moto na usoro nkwụsị site na aka na-agbanwe ma dị irè.
5. Mgbapu mmiri miri emi enweghị ike ịdị na-abaghị uru n'ihe banyere mmiri. Nfuli Otu ma ọ bụ abụọ impeller kwesịrị imikpu n'okpuru mmiri larịị 1m. Ịrụ ọrụ kwesịrị ịhụ mgbanwe na ọkwa mmiri na olulu mmiri mgbe niile.
6. Mgbe ị na-arụ ọrụ, mgbe ịchọtara nnukwu vibration gburugburu ntọala, ị kwesịrị ịlele mgbapụta mgbapụta ma ọ bụ ihe mkpuchi moto; mgbe oke iyi na ntapu, kwesịrị dochie ọhụrụ iberibe.
7. a na-aṅụ, na-agbapụta ya na mmiri mmiri miri emi nke ọma, tupu ịkwụsị mgbapụta ahụ, ntinye nke mmiri na-ekpochapụ.
8. Tupu ịkwụsị mgbapụta ahụ, ị ​​ga-emechi valvụ mmiri, bepụ ike, mechie igbe ngbanwe. Mgbe oyi nwere nkwarụ, a ga-etinye mmiri na mgbapụta.
Disclaimer: Ngwongwo ọgụgụ isi egosiri na ngwaahịa(s) edepụtara bụ nke ndị ọzọ. A na-enye ngwaahịa ndị a naanị ka ihe atụ nke ike nrụpụta anyị, ọ bụghị maka ire ere.
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ ndị na-ebupụ mgbapụta gravel kacha mma nke China - ụdị SYB nwere mgbapụta diski onwe ya - Boda
Osote: Uru Antiabrasive Slurry
12v Mgbapụta mmiri
1 hp mgbapụta mmiri
2hp mmiri mgbapụta
5hp mmiri mgbapụta
Mgbapụta mmiri na-akpaghị aka
Mgbapu mmiri na-akwado batrị
Mgbapụta mmiri oyi
Dc mmiri mgbapụta
Mgbapu mmiri miri emi
Mgbapu mmiri Diesel
Mgbapụta mmiri ruru unyi
Igwe mmiri ọkụ eletrik
Ogige mmiri mgbapụta
Mgbapu mmiri na-akwado gas
Mgbapụta mmiri gas
Mgbapụta mmiri mmiri aka
Mgbapu mmiri dị elu
Mgbapụta Mgbasa Ozi Mmiri Na-ekpo ọkụ
Mgbapụta mmiri ọkụ
Mmiri Na-ekpo ọkụ Na-emegharị Mgbapụta
Sistemụ na-emegharị mmiri ọkụ
Pump mmiri akwụkwọ ntuziaka
Igwe mmiri igwe igwe
Mgbapu mmiri Multistage
Pump mmiri mmanụ ala
Mgbapu mmiri nwere ike ibugharị
Mgbapụta mmiri Rv
Igwe mgbapụta mmiri nke onwe
Mgbapụta mmiri na-akwado anyanwụ
Mgbapụta Mgbapụta Mmiri Mmiri nke anyanwụ
Mgbapụta mmiri nke anyanwụ
Mgbapụta mmiri nke nwere ike ime
Mgbapụta Njirimara Mmiri
Pump Isi iyi mmiri
Mmiri Jet Pump
Mgbapụta ntụtụ na-akwado mmiri
Ihe nkwalite mmiri
Mmiri Nrụgide Mmiri
Mmiri mgbapụta Aquarium
Mgbapụta mmiri maka Ụlọ
Igwe mgbapụta mmiri
Mmiri mgbapụta rọba Cap
Mmiri Pump Rubber Akara
Mgbapụta mmiri mmiri
Mmiri mmiri na mgbapụta
Mgbapụta Mbufe mmiri
Mgbapu mmiri mmiri mmiri
Mmiri mmiri nke ọma
Abrasive slurry mgbapụta akụkụ Slurry mgbapụta Impeller
PWL mgbapụta mmiri
Slurry mgbapụta akụkụ mapụtara
SFX-Ụdị emelitere onwe onye